Matthew Modine – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
47 Metres Down (2017) မက်ဆီကိုနိုင်ငံကို အလည်ထွက်လာတဲ့ ညီအမနှစ်ယောက် ငါးမန်းသွားကြည့်ဖို့ ပင်လယ်ထဲ ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ သူတို့အလှည့်ရောက်မှ ငါးမန်းလှောင်အိမ်က ကြိုးပျက်ပြီး သမုဒ္ဒရာအောက်ခြေ ၄၇မီတာကို ကျသွားကာ သူတို့ ပိတ်မိသွားခဲ့တော့တယ်။ လေO2ကလဲ တစ်နာရီစာလောက်ပဲကျန်တော့တယ် ပြီးတော့ ကြီးမားတဲ့ငါးမန်းဖြူကြီးတွေကလဲ အနားမှာ ပတ်လည်ဝိုင်းနေတာ သူတို့ ရှင်သန်ဖို့က တိုက်ခိုက်မှရမယ်။ ကြားထဲ လှေနဲ့ အရမ်းဝေးလွန်းသွားတော့ အဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့စက်က အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ သူတို့ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားကြမလဲ??? ငါးမန်းတွေရန်ကို ဘယ်လို တိုက်ခိုက်ကြမှာလဲ??? သူတို့ အသက်ရှင်မှာလား??? ဒါမှမဟုတ် ငါးမန်းစာပဲ ဖြစ်သွားမလား???ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရအောင် Credit Review
IMDB: 5.6/10 37,600 votes